शम्भवामी युगेः युगेः | मझेरी डट कम
editor — Sun, 06/12/2016 - 15:59
खोजी सबैको छ । कोही बाहिर खोज्छन् । कोही भित्र । भित्रबाहिर दुवैतिर खोज्नेहरू पनि छन् –यो संसारमा । कोही मुठी कसेर खोज्छन्, कोही मुठी खोलेर । जसले जता खोजे पनि धेरथोर अवश्य पाउँछ–पाउँछ । नखोज्नेले त के पाउनु के गुमाउनु र ? बाबु आमाको खोजीमा हामी आयौँ । हाम्रा खोजीमा सन्ततिहरू आएका छन् । भोलि सन्ततिहरूकै खोजीमा चीर नूतन अनुज र भान्तेहरू पनि आउछन् –शनैशनैः ।
तथागत र नन्दीभृङ्गी विषयाभिमुख र कामाभिमुख भएर मुस्कानका लहर लहरमा पौरिँदै–तैरिँदै नाद र नखराको त्रुटि विश्लेषण गर्दै पूर्णाङ्की र एकाङ्की समस्याहरूका साथमा आलोडित हुँदै सगुनका साइपाटाहरू लिएर आउछन् । लश्करहरू भित्र जन्ती र मलामी दुवै छन् । आयोजक र अतिथिहरू दुवै छन् । दुई वैपिरित्य नदीका किनार यहाँ साथसाथै देखिन्छन् । अभिनयमा नै सही बाघ र बाख्रा एउटै जङ्गलमा विचरणार्थ निस्केका छन् । रेमन चस्माले संसार बदलिने भए रेमनको ‘ट्रेडमार्क’सहित उहिल्यै संसार अर्कै भैसक्ने थियो, जस्तो अहिले छैन र देखिँदैन । दाउन सिद्धिदै गएपछि दर्शनले क्रमशः चस्मा फेरेको हो –कसलाई थाहा छैन ? दृष्टिको व्यापार शैलीमा फेरबदल गरेको हो । परायामार्फत् संवेदनाको कित्ताकाट गराएर मूल मिसिल मुल्तवी राखिएको हो । लामो र लक्ष्याभिमुख यात्रालाई मोडिएको हो । भित्र जनगित गाउन लगाएर बाहिर अपाङ्गहरूलाई भजन गीतमा नाच्न लगाइएको हो । अह्राइएको हो । सुस्मुम्याएर वा औंला ठड्याएर बोली एव म लोली फेरिएको हो । वृत्तमा घुमेपछि लक्ष्यमा पुगिदैँन भन्ने कसलाई ज्ञात थिएन ? तर पनि हामी घुमिरहेछौं । कार्तिकेयले सुमेरु र कुमेरु घुमेर आएपनि गणेशले वृत्तीय शैलीमा घुमेरै महादेव र पार्वतीबाट पुरस्कार अनि लोकबाट सम्मान पाए । पूराणले उपजीव्यता प्रकट गर्दै भनेको छ ।
कतै थोकमा त कतै खुद्रामा छन् । सोकेसमा सजाइएका दर्शनहरूमा दाउन तुरिइसक्यो । तिजोरीमा राखेर बयेलिएका नाबालक इच्छाहरूको साथ लिएर अब कुनै आरोही सहासको सगरमाथा उक्लिन सक्दैन । आचार संहितालाई टिम्मुर साँदेर अचार बनायो –हाइब्रिड मानवले । भनिदैछ –संसारमा आँसुको होलसेल बिक्री यद्यपि जारी छ तर पनि हाँसो विज्ञापित भैरहन्छ –यहाँ ।
नायक र खलनायकहरू आउछन् । ताण्डव र लास्सो आउछन् । नटराज र नटराज्ञीहरू पनि आउछन् । कोही मौलिक आउछन् । कोही पुनसंस्करण भएर आउछन् । दीप्ति र पूर्वदिप्ति शैलीमा रम्रिएर । जसरी होस् आउछन् । जान्छन् । यशोगान भएर आउछन् । शोकगित भएर जान्छन् । अदव भएर आउछन् । अटेरी भएर जान्छन् ।
खोज्न पनि जान्नुपर्छ । तौर तरिकाहरू छन् –खोजीका । तरेली–तरेली हुँदै, दिग्दिगन्तमा अहर्निष खोज्ने कि ? व्योम र आकाश गंगामा खोज्ने ? आफूभित्र खोज्नेले आफूबाहिर खोज्नेभन्दा बढी पाएको महशुस गर्छ । शरीरले खोज्ने कि आत्माले खोज्ने ? माथले नियाल्ने कि वादले प्रमाणित गर्ने ? साहित्यले खोज्ने कि संगीतले ? पथ औ पन्थ अनेकानेक छन् । दिक् र विषयाभिमुख भई खोजी गर्नेहरू पनि छन् । खोजीका मार्ग र मोक्ष पृथकाभिमुख छन् । इन्द्रीय संवेद्य शैलीले खोज्नु र आत्माले सन्धान गर्नुमा भने फरक छ । मासा तोलाको हैन पउलपउल फरक छ ।
आँखा हुनेहरू प्रायः आँखा खोलेर खोज्छन् । आँखा नदेख्ने या दृष्टिविहीनहरू आँखा चिम्लेरै खोज्छन् । अहिले त दृश्यविहीन भन्नुपर्छ दृष्टिविहीनहरूलाई पनि । सादृश्यलेभन्दा अदृश्यले बढी देख्छ । उसको हेराइ चर्मचक्षुबाट नभई आत्मदृष्टिबाट हुने गर्छ । भारतवर्षका महर्षि रमण नबोलेरै बढी बताउँथे । उनले आफ्ना चेलाचेली र भक्तलाई उनीहरूको मुहारमा हेरेर जुन भाव पोख्थे साधनामा दक्ष भएका चेलाहरू त्यही भाव पढेर न्यानो ग्रहण गर्थे ।
बोल्नु नबोल्नु हो भने नबोल्नु अँझ धेरै बोल्नु हो । ज्ञानीहरू, सन्तहरू थोरै बोलेर संसारलाई डोर्याउँछन् । बतौराहरू बढी बोलेर अरूको पछि लुरूलुरू लाग्छन् । अल्पविकसित देशमा बतौराहरूको जनघनत्व बढी छ ।
केटाकेटीमा हामी दौंतरीसामु बाललीला गर्दै जिस्कँदा भन्थ्यौ –एउटा आँखाले एक किलोमीटर देख्छ भने दुइटा आँखाले कति किलोमीटर देख्ला ? हतार हतारमा हामी माझबाटै जवाफ हुने गर्थ्यो –दुई किलोमीटर । तर होइन रहेछ । एउटा र दुइटाको दृष्टिशक्ति उहिरहेछ, अर्थात् बराबर । इन्द्रीय शक्तिमा चाक्षुष शक्तिको बल बराबरी हुने ज्ञान जीवनमा साबालक भएपछि मात्र थाहा भयो ।
शंकाराचार्य ‘ब्रह्म सत्य जगत् मित्थ्या’ भन्थे तर उनका गुरु ‘जगत् सत्य ब्रह्म मित्थ्या’ भन्थे । गुरु चेलामा पनि कस्तो कत्रो विरोधाभाष ? बाउ छोरो मजस्तै होस् भन्छ रे, छोरो म बाउ जस्तो कहिल्यै नहूँ भन्ने गर्छ । के कारण छ त्यहाँ, त्यस्तो अमिल्दोपन । बेमेलको जननी वास्तवमा के हो ? द्वन्द्व नै संसारको विकासे वीज हो । बाउ र छोरामा, गुरु र चेलामा को सत्य छ त्यो थाहा पाउन सकिँदैन । को गलत छ –त्यो पनि ज्ञात छैन । आफूतिरबाट हेर्दा आफ्नो सब्ल्याँटो र अर्काको बिब्ल्याँटो देखिनु संसारको रीत हो ।
कवि, प्रेमी र पागल उस्तै हुन् । कवि कविताको लागि पागल हुन्छ । जीवन नै कवितालाई अर्पेको हुन्छ –कविले । प्रेमी पनि प्रेमका लागि अहोरात्र लागेको हुन्छ । प्रेम ईश्वरको अमूर्त रूप हो । प्रेमलाई सबै मनुष्यले पर्गेल्न सकेका हुन्नन् । अमूर्त रूपलाई प्राप्त गर्न एकप्रकारले पागलै हुनुपर्छ । जस्तो अमूर्त कलालाई जो कसैको चर्मका दृगले परख गर्न सक्दैन । संसारमा जो छ त्यो देखिदैन । जो देखिँदैन त्यो हुन्छ । यस्तो कुरा गर्नेलाई समाजले नै पागलको संज्ञा दिन्छ । देवकोटालाई पनि यो समाजले पागल भनेको थियो अनि उनैले यो समाजलाई पागल भनेर कविता रचेका थिए । को पागल समाज कि देवकोटा ? उत्तर खोजी अँझै जारी छ ।
सुत्ने मानिस सुतिरहन्छ । उठेको मानिस हिँड्ने हो । हिँडेको मानिस नै दौड्ने हो । सबै सँगसँगै जस्ता देखिन्छन् तर सबैको दौड आआफ्नै हुन्छ । प्रतिस्पर्धा यहाँ कसैसँग कसैको पनि हुँदैन । सबै मानिसहरू सँगसँगै भए जस्ता हुन्छन् तर ती सबै एक्लाएक्लै हुन्छन् ।
सात अरब मानिसहरू छन् तर दुईको मात्र अस्तित्व कायम छ –संसारमा । नर र नारी । नर भनेको महेश र नारी भनेकी महेश्वरी । विम्बात्मक रूपमाभन्दा भग र लिङ्ग । शिव र शक्ति । पेनिस एण्ड भेजिना । भाले र पोथी । कान्छा र कान्छी । हिरो र हिरोइन । डाँगो र छाउरी । अनि किन यस्तो राँडी रुवाइ संसारमा ।
सभ्यताका सिँढी चढ्दै चढ्दै मानिस यहाँ आइपुगेको छ । तर कस्तो अचम्म छ भने सभ्यताको उषाकालमा पनि मानिस एक्लो थियो अहिले पनि एक्लो छ । सभ्यताको प्राचीमा पनि मानिस दिगम्बर थियो अहिले पनि लगभग दिगम्बर भैसकेको छ । यो उसको अबुझपन हो या बुझ्झकीपन हो । अहिलेसम्म ज्ञाताज्ञात नै छ ।
जीवन तासको खाल हो । अँझ सपाटभन्दा त तासकै कट्फर् हो । यहाँ कोही कसैले कुनै वस्तु या भौतिक चिजको धाक नलगाए पनि हुन्छ । आज जो मसँग छ त्यो हिजो कसैसँग थियो । हिजो कसैसँग भएको चिज आज मसँग छ । अनि आज मसँग भएको चिज भोलि फेरि कसैसँग हुन सक्छ । तरल छ भौतिकी अनि तरल छ संसार ।
भन्नेले त भनेका छन् –आँसु अनि रक्सी र रगत सबै तरल छन् । तरल नै गरल पनि हो । पीयूषलाई पनि काव्यले तरल नै चित्रण गरेको छ । रस भनिने संसारका सबै विषय, वासना र वस्तुहरू तरलमय छन् । जुन चिज तरल छन् तिनीहरू चरित्र र विशेषतामा पनि तरल छन् । तरल चिज बग्न खोज्छन् । बग्नु र सिँचन गर्नु उसको धर्म हो । आँसुले हृदयलाई सिँचन गर्न खोज्छ, मदले शरीरलाई अनि पीयूषले आत्मालाई । यी सबै कुनै न कुनै तबरले बग्न खोज्छन् । पसिनाका बुँदमा जति संवेदना हुँदैन त्योभन्दा आँसुमा कति गुना बढ्ता हुन्छ । यो अँझसम्म कसैले आँक्न सकेको छैन ।
जीवनको आदिपर्व होस् या मृत्युको अन्त्येष्ठी यी सबैसबै परिप्रेक्ष्यहरूमा, सन्दर्भहरूमा आँसुको खोल लगाइएको हुन्छ । चुरो जे भए पनि गुदी त आँसु नै हो । कसैले मानोस् या नमानोस् आँसुको मोल अनमोल हुन्छ । मोती र आँसु उस्तैउस्तै हुन् । यिनीहरूको मोल आँक्न सकिन्न । अनुभूत गर्न भने सकिन्छ । यो हिजो पनि अमापनीय थियो । आज पनि अमापनीय छ । सायद् भविष्यमा पनि अमापनीय हुनेछ ।
विम्ब विघटनहरूका सन्दर्भहरूले, प्रतिक संयोजनका पुरोवाकहरूले अहिले समयमा आँसुका समुद्र निर्माण गर्न सकेको छैन । बजारको विज्ञापनमा विज्ञापित आँसु होइन त्यो त स्वार्थ हो । स्वार्थमा आँसुको उच्चार्थ हुनै सक्दैन । गरिबीमा, असक्षमतामा र निरीहतामा जति आँसु बगेको छ त्यो अमिरीमा, सक्षमतामा र सबलतामा बग्न सक्दैन । हुन्न पनि ।
स्थलचर, जलचर, उभयचर र खेचरलाई त प्रकृति माताले उत्पत्तिमै सिकाउने सधाउने गर्छिन् । संसारका कुनै कुनामा पनि उपर्युक्त चार प्रकारका जीवलाई सिकाउने पढाउने शिक्षालय खोलिएको ज्ञात अहिलेसम्म कम्तीमा यो कलमजीवीलाई छैन ।